FALANQEYN: Maxay ka dhigan yihiin go`aamada ka soo baxay shirka Golaha Iskaashiga D.Gobaleedyada ee Garoowe lagu soo xiray? – Puntlandtimes
FALANQEYN: Maxay ka dhigan yihiin go`aamada ka soo baxay shirka Golaha Iskaashiga D.Gobaleedyada ee Garoowe lagu soo xiray?
October 25, 2018 W LAASCAANO
GAROOWE(P-TIMES)- Hogaamiyaasha golaha Iskaashiga dawlad gobaleedyada xubnaha ka ah dawladda Faderaalka Soomaaliya ayaa wada hadalo uga socday afar maalmood, kuna shirsanaa magaalada Garoowe ayay soo gabagabeeyeen, waxayna ka soo saareen warsaxaafadeed ku saabsan waxyaabihii ay ka wada hadleen maalmihii shirkoodu socday.
Qodobada ugu waa weyn ee aan lafileynin waxaa kamid ahaa dhismaha Xisbi Siyaasadeed oo dabcan sida muuqata qeyb ka qaadanaya doorashooyinka 2020-ka ee laga filayo Soomaaliya, waxaana hogaamiye ay u doorteen KMG ah Madaxweynaha Puntland ee waqtigu ka dhamaanayo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Sidaas oo kale dhismaha ciidamo kor u dhaafaya 4000Kun Askari oo ay leeyihiin dawlad gobaleedyada ayaa madasha looga dhawaaqay yaboohoda, sidda war ogaatay Puntlandtimes-na habka shaqo iyo isku dhafkooda waxaa loo xilsaaray guddi wasiiro ah oo ay dhinacyadan ka tirsan yihin.
Falanqeeyaasha siyaasadda ayaa rumeysan in madashadii Dawlad gobaleedyada ay hadda shaatiga siyaasadeed ka bedesheen heer dawlad gobaleed oo ay noqdaan Xisbi Faderaal, kaas oo ay doonayaan in ay saameyn ugu yeeshaan howlaha doorashooyinka 2020-ka.
Arrimaha xusida mudan ee ay dhinacyadu sheegeen waxaa kamid ah in aysan aqoonsaneyn Guddiga Adeega Garsoorka, Habraaca Doorashooyinka iyo Qorshaha nidaamka Asxaabta badan oo ay dhaliilo u soo jeediyeen, waxayna sheegeen in dhamaan wadooyinka la maray aysan sharciyad ku fadhiyin.
Kasokow warsaxaafadeedka in Madashii Dawlad gobaleedyada laga dhigay Xisbi Faderaal oo Siyaasi ah, waxyaabaha ugu badan ee fadhiga hareyey waxaa kamid ah khilaafka kala dhaxeeya dawladda Faderaalka oo ay hadda garowsadeen in ay qorshahooda banaanka keenen oo ay u diyaar garoobaan in Hab Xisbi siyaasi ah ula dagaalamaan Xisbiyada Siyaasadeed ee dalka.